Ihe Igwe Igwe 8 dị elu nke Henry Fonda
TV & Nkiri Ndị ọkachamara
8 Movies Starring Henry Fonda
Onye na-eme ihe nkiri, dike nke ndị mmadụ
Onye na-egwuri egwu nke na-egosi onye ọ bụla na-ahụ maka ihe ọ bụla, Henry Fonda bụ kpakpando nke ọtụtụ fim kpochapụla n'ime iri afọ isii. Ọ na-arụ ọrụ na ndị nduzi nke ụbọchị ahụ ma rụọ ọrụ kachasị mma ya na John Ford tupu ha ada na 1955.
N'agbanyeghị na ọ gbanwere ọtụtụ ọmarịcha arụmọrụ n'oge ọrụ ya, a họpụtara Fonda nanị maka Ụlọ Akwụkwọ Academy abụọ, ọ meriekwa na 1981 maka ọrụ ikpeazụ ya. N'agbanyeghị nke ahụ, o nwere ọrụ pụrụ iche nke mmadụ ole na ole bibiri. Nke a bụ ihe nkiri kiriata asatọ nke Henry Fonda dere.
Tupu ọ bụ onye isi nke iri na isii nke United States - ma ọ bụ ọbụna onye na-achụ nta ọkụ - Abraham Lincoln bụ ọkàiwu na-eto eto na Illinois. N'ebe a, Fonda na-akọwa "Young Mbụ Lincoln" nke aha ahụ, bụ onye na-akwụsị ịchụpụ ụmụ okorobịa abụọ na-ebo ebubo ụgha nke igbu ọchụ ma na-eme ka ha mata na ha adịghị ọcha. John Ford na-eduzi ya, ihe nkiri ahụ weere òkè nke nnwere onwe akụkọ ihe mere eme, mana nke ahụ adịghị mkpa ebe ọ bụ na ọrụ Fonda bụ ihe nṅomi ma nyere aka gbanwee ya dị ka kpakpando bụ isi.
O siri ike ikwere, mana oge Fonda dị ka ex-con Tom Joad na mmegharị Ford nke John Steinbeck "Mkpụrụ vaịn nke iwe" bụ nanị nhoputa ya maka Best Actor ruo mgbe ọ rụzuru na 1981 "On Golden Pond." Mgbe ọ laghachiri n'ụlọ mkpọrọ ebe ọ nọ na-eje ozi maka igbu ọchụ, Joad hụrụ ugbo Oklahoma nke ezinụlọ ya gbahapụrụ maka ụkọ mmiri ozuzo na ụlọ ọrụ ndị nwere anyaukwu. Ọ na-elekọta iji chọta ha na mkpebi siri ike, na-ezukọta ezinụlọ ya maka nkwa nke ndụ ọhụrụ na ụgwọ dị elu na California. Abụọ dị egwu ma nwee olile anya, mmegharị nke Ford nke akwụkwọ Steinbeck na-adaba na n'ebe ụfọdụ karịa ihe kpatara ihe. Fonda kwadoro ọnọdụ ya dị ka onye dike nke ndị mmadụ na ihe ọtụtụ ndị weere na ọ bụ ọrụ ya kacha mma.
"Nne Nwanyi" (1941)
Ụlọ Ọrụ Ntaneti Universal
Preston Sturges dere ma duzie ọganihu a dị egwu nke ndị nwoke na nwanyị bụ ebe Fonda na-akpọ ọkachamara na-eme ihere ma yiri ka ọ na-eme ka ndị mmadụ mara otu ụgbọ mmiri nke dị na Niu Yọk. Otu n'ime ndị na-anụ ọkụ bụ Barbara Stanwyck, bụ onye hụrụ onwe ya n'anya mgbe nna ya na onye òtù ọlụlụ ya Fonda maka $ 32,000 na egwuregwu kaadị. Ma, ọ na-enweta ọbụna mgbe ọ hụrụ n'anya ma ọ na-ebuli imebi obi ya. Fonda na Stanwyck na-egosipụta kemịkal dị iche iche na otu n'ime egwuregwu ndị na-atọ ọchị nke oge ahụ.
"Ox-Bow Incident" (1943)
Ọrụ ọrụ ịhụnanya maka Fonda na onye nduzi William Wellman, "Ox-Bow Incident" bụ ikpe na-ezighị ezi nke ndị ikpe na-ahụ maka ndị mmadụ na-atụgharị uche na mpụ na ntaramahụhụ. N'ịbụ na e wepụrụ ya n'oge ụbọchị ọkọlọtọ nke Agha Ụwa nke Abụọ, ihe nkiri ahụ mebiri ịbụ ọkwa nke ụlọ ọrụ. N'ihe dị na 1885 Nevada, ọ bụ Fonda mere ka ọ bụrụ onye na-egwu egwu nke na-eme ka otu ìgwè nke ndị obodo na-achọ ịbọ ọbọ maka igbu ọchụ nke anụ ụlọ. A na-ebo ndị mmadụ atọ ebubo n'ụzọ na-ezighị ezi maka mpụ ahụ ma hụ onwe ha na njedebe nke eriri, ọ bụ naanị ndị obodo ahụ ga-amụta mgbe eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị igbu ọchụ dị otú ahụ. N'agbanyeghị ọdịda azụmahịa ya, Western Western psychological na-asọpụrụ ma na-ege ntị ekele na telivishọn.
Echere na otu n'ime ebe ndịda ọhaneze kachasị mma - nke kachasị mma na onye nduzi John Ford - "My Darling Clementine" kpakpando Fonda dịka Wyatt Earp, bụ onye na-abata na Tombstone, Arizona na ụmụnne ya iji mee ego dịka ndị na-azụ anụ na ndị ọrụ ugbo. Ma, mgbe ha na-abanye na ndị òtù Clanton ahụ na-apụnara mmadụ ihe, Earp ejirila obi ike laghachi azụ n'ịkwado iwu ahụ, na-eduga ná nkwụsịtụ nke a na-agbapụta nke ọma na OK Corral. Earp na-egosi na ọ bụ nkwuwa okwu, ma ọ bụ dịtụ anya onye na-adịghị ahụ anya nke na-achọta onwe ya n'etiti mmepeanya na mmebi iwu nke West.
Mgbe ọtụtụ afọ kwụsịrị na fim, Fonda weghaara ọrụ Tony-winning na mmemme 1955 nke abụ ọchị "Mister Roberts," nke John Ford na-eduzi. Fonda na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-echere ka e ziga ya n'ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ebe ọ nọ na-achọsi ike ịhụ ihe ọ ga-eme n'oge ọ bụla, naanị ka ọ kwụsị oge ya na onyeisi ndị agha na-eme ihe ike ( James Cagney ) na ndị na - Jack Lemmon). Ihe ntụrụndụ na-atọ ụtọ, "Mister Roberts" bụ nnukwu ihe egwu na ndị na-ege ntị, ọ bụ ezie na n'azụ Mpaghara Fonda na Ford bịara na-ada, na onye nduzi na-agbapụ onye nkiri ahụ. Fonda ṅụrụ iyi na ọ gakwaghị arụ ọrụ na Ford ọzọ ma mezuo nkwa ya, na-eme ka otu mmekọ ọnụ na-esere fim asaa.
"Ndị Iwe Na - ewe Iwe" (1957)
Fonda mere ka ọ bụrụ naanị ya na-eji "12 Angry Men" mepụta, "Sidney Lumet ji nlezianya nkuzi ọhụụ nke dabeere na mmepụta TV nke 1954 nke ọma. Ọ na-akpọrọ ndị omeiwu na-ekpebi ikpe maka ikpe maka igbu ọchụ na-eme ka ndị mmadụ na-egbu egbu ma na-eme ka ha kwụsị ikpo ọkụ n'oge okpomọkụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe nkedo na ntọhapụ - ihe ijuanya n'ihi ụda ego isii ya - ihe nkiri ahụ rutere nso ihe niile a na-eme n'ụwa nile na Nhọrọ Nke kachasị mma na Academy Awards maka Fonda. N'ezie, "Ndị Iwe 12" enweela nnukwu ọganihu kemgbe ọ dị elu na ndepụta Fonda.
Mgbe ọtụtụ iri afọ nke na-akpọ dike ahụ na ọtụtụ Western, Fonda na-enye ọrụ dị egwu dika Frank sadist, onye na-egbu egbu oyi nke na-eduga ìgwè ndị omempụ na-agbalị ịkọcha ala bara uru maka ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè. Frank na-agafe n'okporo ụzọ ya na onye na-eme ihe nkiri (Charles Bronson), bụ onye na-anwa ịkwụsị Frank ịghara inweta ala site na nwa agbọghọ mara mma (Claudia Cardinale) ka ọ na-eburu ihe mgbaru ọsọ ya. Onye mbụ na-emezi ka onyeisi ụlọ ọrụ Sergio Leone rụọ ọrụ, mana ọ na-echegharị mgbe ya na enyi ya bụ Eli Wallach kwurịta okwu, bụ onye kpakpando na Sierra Leone na spaghetti Western "Shine ọma, Bad na Ugly." Mkpebi o mere iji chegharia uche gosipụtara amamihe, dị ka Fonda si nyefee otu mgbanwe ya nke a na-echefu echefu.
Igwe Iri Iri abuo Na-amalite I malite
Myrna Loy na William Powell na The Thin Man Movies
Okwu Jake Gyllenhaal banyere "Brokeback Mountain"
8 Movies na-akụ na Robert Mitchum
5 Ihe Egwu Igwe Okpokoro nke Na-ebu Igbe Office
7 Omuma Melodramas
6 Ndị na-emepụta ihe nkiri bụ James Cagney
10 Ihe nkiri Okpokoro Ọdịda Anyanwụ Ụwa
Jim Carrey na "Egwu Na-adịgide Adịgide nke Echeghị Eche," Memories, & Michel Gondry
Ihe Nkwepụta nke Galileo Galilei
Kedu Borax na Ebee Ka Ị Pụrụ Inweta Ya?
Top Nick Lowe Abụ nke '80s
M Kwesịrị Inweta Ọkwa Dọkịta?
Mụta ụzọ 6-8-10 iji meziwanye nsonaazụ gị na ntinye aka
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị daa iwu gị
Nyocha nke 'window mepere emepe' site n'aka Saki
Ịlele Nduzi Nduzi Ike Gị
Gịnị Na-eme Ka Ndị Nwee Nsogbu?
Nkube Skun Swi
Gịnị mere ị ga - eji bụrụ onye isi na - enyere aka na Middle School ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị?
Mkparịta ụka maka Ekpere
Akụkọ na Ọdịnihu nke Maths Vedic
Ike Agnosticism vs. Ike Agnosticism: Gini bu Uzo di iche?
Eziokwu Banyere Ankylosaurus, Armosia Dinosaur
Ndepụta nke 7 n'elu nri ụmụ mmadụ
Vrais enyi - French English Cognates - A
Indirect Object Pronoun - Nwepụta aha ya na-enweghị ihe ọ bụla - French Grammar Glossary
Otu esi eme ka elu Volleyball Block
Ezigbo Ihe Egwu Banyere Onye omeegwu Superman Henry Cavill
Madama Nduzi Ọmụmụ Ntuzi
Ụgha abụọ nke Genesha, Chineke Hindu God of Good Fortune
Ndi Honda Gị nwere Nsogbu Na-amalite Mgbe Ngini ahụ Na-ekpo ọkụ?